Indlu entle / indawo yokupaka yasimahla 10min ukusuka kwiziko. - I-Airbnb
Indlu entle / indawo yokupaka yasimahla 10min ukusuka kwiziko.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguRasa
Iqinisekiswe yiBhodi yabakhenkethi yaseNorthern Ireland Cozy 2 yendlu yokulala ebekwe kwindawo yokuhlala ezolileyo, kufutshane neBelfast City Centre kufutshane (10minutes kwiteksi). Inqaba edumileyo yaseBelfast kuphela (imizuzu emi-5 kwiteksi). Ipropathi isahlaziywa kutshanje kwaye ibandakanya iWifi/iti yasimahla, ubisi lwekofu, iitawuli). Injongo yethu kukwenza ukuba undwendwe lwethu luhlale lumnandi kwaye lukhululekile kangangoko. Lo mhlaba ukufuphi neendlela ezinkulu zebhasi kunye neevenkile ezinkulu
Le ndlu yamkelekile kakhulu. Kukho amagumbi okulala amabini, elinye linebhedi ephindwe kabini .Igumbi lokulala lesibini elinegumbi elinye elinebhedi eqhelekileyo.
-Igumbi lokuhlala / lokutyela: igumbi linetafile yokutyela, i-sofa, i-smart TV, iiNcwadi indawo egqibeleleyo yokuphumla kunye nexesha le-movie :) I-Sony smart TV, umdlali, unomathotholo.
-Ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo kubandakanya: i-oveni, isitovu, iketile, umatshini wokuhlamba wefriji zibonelelwe.
-Igumbi lokuhlambela: iitawuli zokuhlambela ezikhululekile, ziyancomeka.
-Ngaphandle: igadi engasemva ebanzi.
- Ukupaka : kufumaneka ngaphandle komnyango wangaphambili.
Ubumelwane bayo obuthuleyo, indawo yokuhlala, ikhuselekile kakhulu, ithandeka ngokwenene kwaye inobuhlobo
abamelwane :) Sinenani labamelwane abajonge indawo yethu ukuze bahlale bejonge kwipropathi ukuze baqinisekise ukuba konke kulungile.
Umbuki zindwendwe ngu- Rasa
Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kuyo yonke indlu kunye nazo zonke izibonelelo ezineenkcukacha. Ndiyathanda ukunika iindwendwe zam indawo yazo kodwa ndihlala ndikhona ukuze ndiphendule nayiphi na imibuzo kwaye ndincede iindwendwe zam ngayo nantoni na efunekayo ngefowuni yazo yokuhlala, itekisi okanye i-imeyile.
Ndihlala nje i-10 min kude :)
Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kuyo yonke indlu kunye nazo zonke izibonelelo ezineenkcukacha. Ndiyathanda ukunika iindwendwe zam indawo yazo kodwa ndihlala ndikhona ukuze ndiphe…